ဈေးရောင်းသူတွေကို တတ်နိုင်သလောက် အခမဲ့ကြေညာပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ ယုန်လေး | CeleTrend
လတ်တလောလူမှုကွန်ရက်မှာတော့ အနုပညာရှင်တော်တော်များများ ဈေးရောင်းနေကြတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ အခုလိုအချိန်ကတော့ အလုပ်တွေ၊ရိုက်ကူးရေးတွေ အကုန်ရပ်နားထားတာမို့ တချို့ကလည်း အားမနေချင်လို့ ဈေးရောင်းကြသလို တချို့ကလည်း ဝမ်းရေးအတွက် မဖြစ်မနေလုပ်ကိုင်နေကြရတာပါ။ အနုပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင် ဈေးရောင်းလာကြတာမို့ တကယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အနေနဲ့ ဈေးရောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက် ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေလည်း ထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။
ယုန်လေးကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့အမြင်ကို “အနုပညာရှင်တွေ ဈေးရောင်းတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောဆိုနေကျတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး ..အခုပြောမယ့် စကားကိုအနုပညာရှင် အချင်းချင်းကာကွယ်တယ်လို့ မမြင်စေချင်ပါဘူး .covid ဖြစ်တယ် အကုန်အဆင်မပြေကြဘူး .ပုံမှန် ဝင်ငွေ မရှိတဲ့ အချိန်မှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေပြန်ရှိအောင် လူတိုင်းဖန်တီးရမှာပဲ . တက်ကျိုးရင် လက်နဲ့ လှော်ရမှာပဲလေ… ထိုင်နေလို့မှ မရတာ .Covid ဖြစ်တော့ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်အောင် မကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်ကို အရဲစွန့်ပြီး စမ်းတဝါးဝါး လုပ်ကျတယ်. အောင်မြင်မယ် ဘယ်သူ့မှ မထင်ထားပါဘူး. ပရိတ်သတ်တွေက ချစ်ပြီး မထင်ထားတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်တော့… အလုပ်အဆင်ပြေရင် လူတိုင်းပျော်တယ်လေ . တစ်ယောက်စကား တစ်ယောက်ပေါ့ အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ အရမ်းများလာတာပါ ” ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ထပ်ပြီးတော့လည်း အမှန်တကယ်ရောင်းချနေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်လည်း သူ့ဘက်ကလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ မိမိတို့ရောင်းကုန်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်၊ ဆိုင်နာမည်နဲ့ လိပ်စာအပြည့်အစုံကို ပို့ပေးဖို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ ကြေညာပေးတဲ့အနုပညာရှင်တွေအတွက် အနုပညာကြေးရှိပေမယ့် ယုန်လေးကတော့ သူ့ဆီကို စားစရာမုန့်တွေလည်း လုံးဝပို့ပေးဖို့မလိုတဲ့အပြင် အကုန်လုံးကို အခမဲ့ကြော်ငြာပေးသွားပါမယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ…အနုပညာရှင်တွေဈေးရောင်းနေတာကြောင့် ခက်ခဲနေတဲ့ဆိုတဲ့ အမှန်တကယ်ဈေးရောင်းသူတွေကို သူ့ဘက်က တတ်နိုင်သမျှ ပြန်ကူညီချင်လို့ပါဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လတျတလောလူမှုကှနျရကျမှာတော့ အနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြား ဈေးရောငျးနကွေတာကို တှမွေ့ငျရမှာပါ။ အခုလိုအခြိနျကတော့ အလုပျတှေ၊ရိုကျကူးရေးတှေ အကုနျရပျနားထားတာမို့ တခြို့ကလညျး အားမနခေငျြလို့ ဈေးရောငျးကွသလို တခြို့ကလညျး ဝမျးရေးအတှကျ မဖွဈမနလေုပျကိုငျနကွေရတာပါ။ အနုပညာရှငျတှကေိုယျတိုငျ ဈေးရောငျးလာကွတာမို့ တကယျအသကျမှေးဝမျးကြောငျးအလုပျအနနေဲ့ ဈေးရောငျးနတေဲ့သူတှအေတှကျ ခကျခဲနတေယျဆိုတဲ့ ဝဖေနျမှုတှလေညျး ထှကျပျေါလကျြရှိပါတယျ။
ယုနျလေးကတော့ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး သူ့ရဲ့အမွငျကို “အနုပညာရှငျတှေ ဈေးရောငျးတာနဲ့ ပကျသကျပွီး ပွောဆိုနကေတြာ စိတျမကောငျးပါဘူး ..အခုပွောမယျ့ စကားကိုအနုပညာရှငျ အခငျြးခငျြးကာကှယျတယျလို့ မမွငျစခေငျြပါဘူး .covid ဖွဈတယျ အကုနျအဆငျမပွကွေဘူး .ပုံမှနျ ဝငျငှေ မရှိတဲ့ အခြိနျမှာ ပုံမှနျဝငျငှပွေနျရှိအောငျ လူတိုငျးဖနျတီးရမှာပဲ . တကျကြိုးရငျ လကျနဲ့ လှျောရမှာပဲလေ… ထိုငျနလေို့မှ မရတာ .Covid ဖွဈတော့ ပုံမှနျလညျပတျနိုငျအောငျ မကြှမျးကငျြတဲ့ အလုပျကို အရဲစှနျ့ပွီး စမျးတဝါးဝါး လုပျကတြယျ. အောငျမွငျမယျ ဘယျသူ့မှ မထငျထားပါဘူး. ပရိတျသတျတှကေ ခဈြပွီး မထငျထားတဲ့ အရာတှေ ဖွဈတော့… အလုပျအဆငျပွရေငျ လူတိုငျးပြျောတယျလေ . တဈယောကျစကား တဈယောကျပေါ့ အဲ့လိုလုပျရငျးနဲ့ အရမျးမြားလာတာပါ ” ဆိုပွီး ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ထပျပွီးတော့လညျး အမှနျတကယျရောငျးခနြတေဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျလညျး သူ့ဘကျကလုပျပေးနိုငျတဲ့အရာလေးတဈခုအနနေဲ့ မိမိတို့ရောငျးကုနျကို ဓာတျပုံရိုကျ၊ ဆိုငျနာမညျနဲ့ လိပျစာအပွညျ့အစုံကို ပို့ပေးဖို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ အှနျလိုငျးကနေ ကွညောပေးတဲ့အနုပညာရှငျတှအေတှကျ အနုပညာကွေးရှိပမေယျ့ ယုနျလေးကတော့ သူ့ဆီကို စားစရာမုနျ့တှလေညျး လုံးဝပို့ပေးဖို့မလိုတဲ့အပွငျ အကုနျလုံးကို အခမဲ့ကွျောငွာပေးသှားပါမယျတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ…အနုပညာရှငျတှဈေေးရောငျးနတောကွောငျ့ ခကျခဲနတေဲ့ဆိုတဲ့ အမှနျတကယျဈေးရောငျးသူတှကေို သူ့ဘကျက တတျနိုငျသမြှ ပွနျကူညီခငျြလို့ပါဆိုပွီး ရေးသားမြှဝခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာ ရဲတွေကို ရာထူးတိုးရပ်ပြစ်ဒဏ်ချတာ ပြည်သူကို ချွေးသိပ်တာလားလို့ ဒဲ့မေးလိုက်တဲ့ သက္ကမိုးညို